Taageerida dowladda Liibiya oo laga shirayo - BBC News Somali
Taageerida dowladda Liibiya oo laga shirayo
16 Maajo 2016
Shir caalami ah oo taageero loogu fidinayo dowladda midnimada qaran ee dhawaan laga sameeyay Liibiya ayaa maanta ka furmaya caasimadda Austria ee Vienna.
Shirka oo ay wadajir u gudoomin doonaan xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka, John Kerry, iyo dhigiisa Talyaaniga, Paolo Gentiloni, ayaa waxaa kasoo qeybgalaya wasiiro caalamka ka socda, gaar ahaan kuwo ay khuseyso arrinta Liibiya.
Haddaba babad ma laga dhalin karaa Liibiya iyada oo aan si buuxda loogu heshiin awood qaybsiga dalkaasi? su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyay Cabduqadir Maxamed Axmed oo ka faalooda arrimaha caalamka.
Khadka telefoonka ee caasimadda Berlin ayuu ugu warramay Suheyba Maxamed Badqas.